Ufuna ukuba ukukhula #herbs ngcono kulo nyaka? Amy wethu ezinye iimbono ezinkulu
Ukukhulisa namakhambi ikuba ethandwayo abapheki balimi ngokufanayo. I mean lowo ungamthandiyo ingcamango behamba ngaphandle kwendlu yakho evuna tyani ufuna zokupheka zakho emitsha esuka egadini? Enye yezona zinto zibalaseleyo namakhambi ukuba izityalo isondlo asezantsi kakhulu, nto leyo eyenza ...
Nangona kukho izityalo ezininzi eluhlaza banokudlala umoya ococekileyo, ngempumelelo ukususa indima longcoliseko ngaphakathi, kodwa izindlu ezilungiswe phantsi iikhemikhali ungcoliso, zekhala, Chlorophytum, Sansevieria kunye nezinye izityalo yeyona deodorant kakhulu zendalo. NASA izazinzulu emva kweminyaka engama-20 r ...
izithuba Okunye namakhambi ezikhulayo
ngomphathi ku 18-03-05
Imali Iindleko womfuno bekhula oregano egadini Ukuqwayita: Inyathelo-by-step imiyalelo Plant idile eyongezelelweyo mabhabhathane yiswallowtail yethu iintlobo basil ozithandayo
Isichumiso for Izikhongozeli imifuno igadi
Herbs ezikhuliselwe kwizikhongozeli baya kufuna isichumiso ngaphezu kwezo likhule egadini. Kungenxa yokuba kungekho ndlela makasizalise izondlo abayisebenzisayo njengoko bekhula. Kodwa ungakhathazeki, akukho mfuneko yokuba uthenge isichumiso entle ngokukhethekileyo izikhongozelo zakho, ungasebenzisa kwesichumiso efanayo ...
Xa kuziwa ikhula ukutya kwakho okunempilo, ngokuba kuhle ukusebenzisa, izichumiso zendalo organic. Ndiyazi ngokulima zomgquba isandi kuyoyikisa, kwaye abantu badla ukufikelela ukuba izinto yemichiza kuba kubonakala lula. Kodwa ukusebenza kunye nendalo, yaye ukusebenzisa izichumiso eziphilayo egadini ayikho impilo kuphela ...
intengiso flower kwizinga eliphezulu Imfono
Namhlanje, Shandong Jinan erhuanxi indlela ezixineneyo e fu kwimarike flower lai. Abantu abaninzi nkqu iindwendwe bathontelana ukuya ukhethe uze uthenge iintyatyambo. Ms xue kunye nentsapho yakhe, aye ukukhetha kuthenga iintyatyambo. Emva kokuba "isivumelwano", ms xue isitya ukuthenga imali yezityalo, ezimbini isitya ibhabhathane orchid, abathandathu 10 azaleas. Ntse ...
Indlela chitha iimbiza yeentyatyambo? Amanyathelo iimbiza intyantyambo
Abantu abathanda iintyatyambo lokuzalanisa intyantyambo ngexesha elithile, kufuneka kwi iintyatyambo isitya for ukusebenza, ngokuqhelekileyo isitya kufuneka iqhutywe yezityalo aleleyo, ekuqaleni kweli xesha entwasahlobo ekupheleni kukaFebruwari ukuya kuMatshi kwangethuba, kwakunye funwa ekuqaleni ka April, inkoliso ukutya izityalo kade, xa t ...
imbiza Good isithombo isitya basuka kwizityalo ngabani ixesha?
Qingdao bo kuhlwayelwe nje et fitow kushishino & trade co., LTD., Lo kwezithole yokuqala, ngokufutshane ukubuna eqhelekileyo. Ikakhulu ngenxa kuhlwayelwe inkqubo njengengcambu ngaphezulu okanye ngaphantsi iza kuchatshazelwa yi ingongoma, emva kuhlwayelwe, makhe epholileyo, indawo umoya izithole kade kwiintsuku ezimbalwa a ca ...
Eziliqela Best Nursery Plants
Nangona kukho izityalo ezininzi eluhlaza esinokucoca umoya, ngempumelelo ukususa isiphumo ungcoliseko ngaphakathi, kodwa izindlu ezintsha ubuciko kukungcola kwemichiza, zekhala noVera, bracketplant, izityalo sansevieria yenye izithako ezisebenzayo zendalo. NASA izazinzulu emva konyaka ngaphezulu kwama-20 ...
Intsingiselo zonke iintlobo iintyatyambo
ETulip uthando izono, nembeko, intsikelelo, eTulip engunaphakade (Purple) Uthando engaphele ndawo, uthando eTulip (abamhlophe) omsulwa, eTulip ecocekileyo (epinki) ubuhle, uthando, ulonwabo eTulip (Red) Uthando izono, eTulip uvuyo (etyheli) ezindilekileyo, ubutyebi, ubutyebi uLily egudileyo, yonke iminqweno kuzaliseka, usikelela Amafutha lily nyulu, izityebi, wedding ...